အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်းထွက်ပေါက်၏အရောင်းသွက်နေဖြင့်အတန်းအစားအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဂုဏျ TVU ကွန်ရက် '' ဆန်းသစ်တီထွင်မှု - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်းထွက်ပေါက်၏အရောင်းသွက်နေဖြင့်အတန်းအစားအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဂုဏျ TVU ကွန်ရက် '' ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
အဆိုပါ 2019 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်းထွက်ပေါက်၏အရောင်းသွက်နေဖြင့်အတန်းအစားအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြစ်ဂုဏျ TVU ကွန်ရက် '' ဆန်းသစ်တီထွင်မှု
Mountain View, CA - ဧပြီလ 17, 2019 - TVU ကွန်ယက်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်, ယနေ့ယင်း၏ TVU တစ်ခုမှာမိုဘိုင်း IP ကို ​​transmitter ကို, အ TVU MediaMind ပစ္စည်းကိရိယာ AI အ-based metadata ကိုမျိုးဆက်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့်၎င်း၏ IS + စီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့် algorithm ကိုသစ် 4K ဗားရှင်းစက်မှုလုပ်ငန်း-ကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုထုတ်ပြန်ကြေညာ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကရဲ့ 2019 စဉ်အတွင်း NAB ပြရန် Las Vegas မှာကျင်းပခဲ့တယ်။ TVU လည်း "၏ထုတ်လုပ်သူမှမိုဘိုင်းဆယ်လူလာ transmitter ကိုပစ္စည်းကိရိယာများထောက်ပံ့NAB ပြရန် "ဟာ NAB ၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် LIVE ။ အဆိုပါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ transmission ကိုအပြစ်ကင်းစင်စွာရှောက် သွား. , ထုတ်လွှင့် Beat, ထုတ်လုပ်သူများ "၏NAB ပြရန် "LIVE အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များနှင့်နေရာများမှာ TVU ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုနိုင်မှသာဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
"ကျနော်တို့ကဤကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့အစည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်၏ကွဲပြားခြားနားသောကဏ္ဍများကိုအသိအမှတ်မပြုရှိသည်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေ," အဲရစ် Chang, စျေးကွက်၏ဒုတိယသမ္မတကလည်း, TVU ကွန်ယက်။ "ဒါဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏နက်ရှိုင်းဖို့နဲ့ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားနေရာများတွင်ဖြစ်ပေါ် applications များတဲ့အကွာအဝေးမှပေးရဲ့ IP-based ဖြေရှင်းချက်မှထောက်ပြသည်။ ရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများပုံပြင်တစ်ပုဒ်-ဗဟိုပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာ၏ဖန်တီးမှုအားလုံးကိုလာမယ့်မျိုးဆက်တိုးတက်မှုများနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' တိုက်ရိုက်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖြစ်နိုင်သောင်အရာကိုနှင့်အနာဂတ်အတွက်ကန့်သတ်တွန်းအားပေးအပေါ်အာရုံစိုက်ပါတယ်။ ငါ NAB ပြသခဲ့သည်ထုတ်လုပ်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုနထေိုငျရနျကြှနျုပျတို့၏ဆက်လက်ကတိကဝတ်၏တိုက်ရိုက်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြစ်သကဲ့သို့ဆုကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြေးအတိတ် 10 နှစ်တာကာလအတွင်းအနိုင်ရရှိယုံကြည်ပါတယ်။ "
ပထမဦးဆုံးခုနှစ်တွင် တစ်နှစ်တာဆုပေးပွဲ၏ပြရန် 2019 ကုန်ပစ္စည်း NAB, TVU ကွန်ယက် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ content ပြန်သုံးအမြန်နှုန်းတစ်ခု AI အ-based metadata ကိုမျိုးဆက်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် - ၎င်း၏ TVU MediaMind ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် AI အ / စက်သင်ယူကဏ္ဍအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ ဤသည် NAB စဉ်အတွင်းပြအထင်ရှားဆုံးနှင့်အလားအလာသစ်ကိုထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့လွတ်လပ်စွာတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရဆုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
TVU MediaMind, ရှိပြီးသားထုတ်လွှင့်မီဒီယာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အတွင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ content ပြန်သုံးအမြန်နှုန်းတစ်ခု metadata ကိုမျိုးဆက်နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစနစ်အ metadata ကို generate ဖို့အချိန်-code ကိုနဲ့ AI-based မျက်နှာနှင့်မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှုပေါင်းစပ်အသုံးပြုသည်။ နှင့်ပွင့်လင်း API အသုံးပြုသူများပေးခဲ့သည်များနှင့် NLE စနစ်များနှင့်အတူတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ MediaMind ပစ္စည်းရှာဖွေရေးရလဒ်များကို generate မှ AI အနှင့်အချိန်ကုဒ်နှစ်ဦးစလုံးအသုံးချသောကြောင့်, က Real-time ဖွဲ့စည်းပုံမှာဒေတာသို့အသံနှင့်ဗီဒီယိုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာထုတ်လုပ်မှု၏မည်သည့်အဆင့်တွင်မယ့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းရှာဖွေနိုင်စွမ်းရဲ့ - တာဝန်ကျရာကနေ On-ဝေဟင်မှတဆင့်။ TVU ရဲ့ AI အအင်ဂျင်၏အကူအညီနှင့်အတူ, Real-time မိန့်ခွန်းအသိအမှတ်ပြုမှုအသုံးပြုသူများကပင်ပိုမိုမြန်ဆန်သူတို့တစ်ဦးတည်းပုံရိပ်တွေရှာဖွေမည်ဟုထက်စာသားကိုရလဒ်များရှာဖွေရန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်ရိုးရှင်းစွာသူတို့ရှာဖွေနေနှင့်ကုဒ်များပုံပေါ်တဲ့အချိန်သင့်လျော်သောအပိုင်းအနေအဘယ်အရာကိုရိုက်ထည့်။ Real-time အကြောင်းအရာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထူးခြားတဲ့ ID နဲ့တစ်ဦးချင်းစီပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အချိန်ကုဒ်များကိုအသုံးပြုသည်။
တီဗီနည်းပညာမဂ္ဂဇင်းပေးအပ် TVU ကွန်ယက် နှင့် Show ကိုဆုချီးမြှင့်၏အကောင်းဆုံး အဆိုပါ4စဉ်အတွင်း TVU တစ်ခုမှာ 2019K ဆယ်လူလာမိုဘိုင်း transmitter ကိုများအတွက် NAB ပြရန်။ အဆိုပါဆုစက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်အတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, အင်္ဂါရပ်ထား, ကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များသတ်မှတ်ချက်အပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး panel ကိုစစ်ကြောစီရင်ရမည်နေကြသည်။ အားလုံးအမည်စာရင်းတင်သွင်းထုတ်ကုန်ခုနစ်ခုအနာဂတ်စာပေထက်ပို 100,000 စာဖတ်သူများမှဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေ form မှာဖြန့်ဝေပါလိမ့်မည်သည့် Show ကိုဆုပေးပွဲအစီအစဉ်လမ်းညွှန်၏အထူးအကောင်းဆုံးအတွက် featured နေကြသည်။
ထို့အပြင် 2019 စဉ်အတွင်းမိတ်ဆက် NAB ပြရန်အဆိုပါ TVU One ၏ 4K ဗားရှင်း မိုဘိုင်း transmitter ကိုထုတ်လွှင့်ရန်စွမ်းရည်နှင့်အတူတစ်ဆယ်လူလာမိုဘိုင်းယူနစ် ultra-HD ကို/ 4Kp60 HEVC အကြောင်းအရာ။ အဆိုပါ TVU တစ်ခုမှာ TM1000 / LTE ကိုမိုဘိုင်း transmitter ကို TVU ရဲ့အလံ-သင်္ဘော HEVC ဆယ်လူလာ 4G ဖြစ်ပါတယ်။ "UHD / 4Kp60 ဆယ်လူလာမိုဘိုင်းယူနစ်အတွက်အောင်မြင်ရန်တစ်ဦးပိုပြီးနည်းပညာပိုင်းစိန်ခေါ်မှု resolution ကိုဖြစ်ပါတယ်" ဟု Chang ကရှင်းပြသည်။ "သို့သော်ကျနော်တို့တစ်စက္ကန့်4ဘောင်မှာအပြည့်အဝ UHD / 60K တွင်ဤစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အန်ကုက်လုပ်ပါကဗီဒီယိုကိုကျော်လွှားနိုင်ပါ။ "
အဆိုပါ TVU တစ်ခုမှာမဆိုတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖြည့်ဆည်းရန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတစ်အားကောင်းတဲ့အစုပေးထားပါတယ်။ ဒါဟာစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင်ဗီဒီယိုကိုထုတ်လွှင့်ခံနိုင်ရည်ကယ်တင်နှင့် HD တစ်ဦး Ultra-ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းဟာ့ဒ်ဝဲကိုယ်ထည်ကနေပုံတစ်ပုံကိုအရည်အသွေးကို။ TVU တစ်ခုမှာအတူအသုံးပြုသူများအပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်, features တွေ, ဒါမှမဟုတ်ပုံတစ်ပုံကိုရညျအသှေးစှနျ့မရှိဘဲအဆုံးသတ်-to-end လုပ်ငန်းအသွားအလာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထိုလယ်၌ပေါ့ပါးအိုင်ပီ-based ကိုဗီဒီယို transmitter ကို၏ဘက်စုံမြှနိုငျသညျ။
PRODU တင်ပြ TVU ကွန်ယက် ယင်း၏များအတွက် NAB 2019 Tech မှဆုချီးမြှင့်နှင့်အတူ + မြားလာ နည်းပညာ။ TVU ရဲ့စီးပွားဖြစ်ထုတ်လွှင့် algorithm ကို + တစ်ပြိုင်နက် Sub-ဒုတိယအောင်းနေချိန်နှင့်အတူမျိုးစုံနတ်ကတော်ကျော်ထုတ်လွှင့်ရန်အသုံးပြုသူများအားဖွ IS ။ IS + မှကျေးဇူးတင်ပါသည် TVU က transmitter တစ်ပြိုင်နက်ဆယ်လူလာ 3G / 4G LTE ကို, Wi-Fi, Ethernet, Ka-band နှင့် Ku-band အပါအဝင် bandwidth ကိုနတ်ကတော်မဆိုပေါင်းစပ်စုပေါင်းနိုင်ပါတယ် ဂြိုဟ်တု0.5 စက္ကန့်ကဲ့သို့အနိမ့်အောင်းနေချိန်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အားကိုးထုတ်လွှင့်ရုပ်ပုံလွှာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, မိုက်ခရိုဝေ့, မိုက်ခရိုဝေ့ကွက်နှင့် BGAN ။ + သာလွန်ဂီယာစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်လုပ်ရန်အဆင့်မြင့်ရှေ့သို့မှားယွင်းနေသည်ပြင်ဆင်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည် IS ။ ရိုးရာ FEC / ARQ နည်းလမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်တဲ့အခါ + packet ကို retransmission ခြင်းဖြင့်မိတ်ဆက်အောင်းနေချိန်မရှိဘဲအနည်းငယ်မျှသာဒေတာ overhead ကိုအသုံးပြုသည် IS ။ အဆိုပါရလဒ်ပင်ရွေ့လျားမော်တော်ယာဉ်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေနဲ့ Ultra-အနိမ့်အောင်းနေချိန်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂီယာဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုမီဒီယာ Links များ:
Twitter ပေါ်တွင် TVU ကွန်ယက်
Instagram ကိုအပေါ် TVU ကွန်ယက်
Facebook ပေါ်မှာ TVU ကွန်ယက်
LinkedIn တို့အပေါ် TVU ကွန်ယက်
YouTube ပေါ်မှာ TVU ကွန်ယက်
အေျကာင္းအရာ TVU ကွန်ယက်®
TVU ကွန်ယက်®အိုင်ပီ-based တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားဖြေရှင်းချက်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ 2,500 ဖောက်သည်ကျော် 85 နိုင်ငံများထက် သာ. နှင့်အတူ, TVU ကွန်ယက် IP ကိုထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းချက်၏မိသားစုထုတ်လွှင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအွန်လိုင်း, ထုတ်လွှင့်နှင့်မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းမှတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာဖြန့်ဝေဖို့အစွမ်းထက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်းအသွားအလာပေးသည်။ အဆိုပါ TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်၏ suite ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအိုင်ပီ, ဆည်းပူး transmit, ထုတ်လုပ်ရန်, စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေဖို့အသုံးပြုထားပြီး HD သတင်း, အားကစားနှင့်အဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ရိုက်ကူး။ အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက TVU ကွန်ယက် ဖြေရှင်းချက်, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.tvunetworks.com
Big တောင်ပိုင်းညီလာခံ ESPN + လွှအားကစားပလက်ဖောင်းများအတွက် JVC ProHD ကင်မရာများကိုအပေါ် Standardizes - သြဂုတ်လ 15, 2019
IBC2019: နယူးဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Solutions ပံ့ပိုးမှု 4K စတူဒီယိုများအတွက် Workflows နှင့်မိုဘိုင်း Applications ကို - သြဂုတ်လ 13, 2019
JVC GY-HM250 Upgrade နဲ့အတူစက်မှုဝန်ကြီးဌာန၏ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝပေါင်းစည်း Facebook မှတိုက်ရိုက်တီဗွီကင်မရာဘဝမှကယျတငျ - သြဂုတ်လ 2, 2019
2015 2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ 2019 NAB 4k 60fps 4K IPTV ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း H.264 သို့မဟုတ် HEVC H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ ip isovideo JCT-VC ကို မိုဘိုင်းဂီယာ NAB16 ဆူညံသံလျော့ချခြင်း TVU MediaMind TVU ကွန်ယက် TVU တစ်ခုမှာ UHD / 4K / HD ကို viarte Warsaw ကို	2019-04-18
ယခင်: Quantum ရဲ့မြောက်အမေရိကမီဒီယာနှင့်တစ်နှစ်တာ၏ Entertainment က Partner Named ASG
နောက်တစ်ခု: အပြည့်အဝကို Motion Video (FMV) / ပုံရိပ် Analyst,